အဘယ်သူမျှမကလေး၏ကစား - ဒါကြောင့်သင်သည်လက်ျာသူငယ်တန်းကိုရှာဖွေ
နေရာများကိုခွဲဝေ၏နည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်. ထွက်ရှာမည်
မွန်တက်ဆိုရီ, ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသို့မဟုတ် Integrated သူငယ်တန်းကြိုက်တတ်တဲ့? လက်ျာပျိုးခင်းကျောင်းမှာရွေးချယ်ခြင်းလွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမယ့်မိဘမြားစှာဘာမှအဘို့ခက်ခဲသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကလေးအတွက်လက်ျာကိုရှာဖွေ, ပညာရေးသဘောတရားများ၏မျိုးစုံတို့အတွက်ခက်သောကွောငျ့ဤအတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအအခမဲ့သူငယ်တန်းရွေးချယ်မှုခွင့်ပေမယ့်, ဂျာမနီရှိပေမယ့်သေချာပေါက်လိုချင်သော device အတွက်နေရာတစ်နေရာအခမဲ့ကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ။
မဟုတ်သေချာပေါက်တစ်ဦးလေပြေ - ဒါကြောင့်သင်သည်လက်ျာသူငယ်တန်းကိုရှာဖွေ
အပြင်ကနေ, သင်, မိခင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဖခင်အဖြစ်သူတို့တစ်တွေတစ်နေ့တာစောင့်ရှောက်မှုစင်တာများ၏အရည်အသွေးအသိအမှတ်မပြုနိုင်သည့်အားဖြင့်စံနှုန်းများကိုသိသင့်ပါတယ်။
သငျသညျသုံး၏အသက်အရွယ်ကနေသင့်ကလေးကိုသူငယ်တန်းတက်ရောက်ရန်ချင်လျှင်, applications များများသောအားဖြင့်ဇန်နဝါရီလနှင့်မတ်လအကြားရာအရပျယူပါ။ ဧပြီလ RSVP ကစေလွှတ်နေကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း-run အချိန်ကန့်သတ်အတွက်အဆောက်အဦးများနှင့်အတူမြို့ပြမူလတန်းကျောင်းရှိသူတို့ထံမှအနည်းငယ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
သင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အဖြစ်အလုပ်အကိုင်ဝင်ချင်သောကွောငျ့, သငျသညျနံနကျစောစောအလုပ်မစတင်မီ 12 လအတွင်းရန်သင့်ရှာဖွေရေး, ဒါပေမယ့်ကိုအနည်းဆုံး 15 စတင်သင့်ကြောင်း, တစ်ရက်စောင့်ရှောက်မှုစင်တာအတွက်တတိယမွေးနေ့စောင့်ရှောက်မှုမပြုမီသင့်ကလေးရစေလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးသူငယ်တန်းများအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ပိုပြီးတက်ကြွလာပြီမီ, သင်သည်သူငယ်၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသင့်ကလေး၏သဘောသဘာဝစဉ်းစားရန်အသုံးဝင်သည်။ ယခုအချိန်အထိကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူနည်းနည်းအတွေ့အကြုံကိုရာ၌ခန့်ထားပြီသူကိုရှက်တတ်ခြင်းနှင့် reserved ကလေးများကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားတဲ့အုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူအသေးစား devices တွေကိုနောက်မှာမျှော်ကြည့်နေကြသည်။
သင့်ကလေးသည်ကြီးမားသောတူးဖော်ရေးဝမ်းမြောက်ခြင်း, ဥပမာ, သူငယ်တန်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်အိတ်ဖွင့်အယူအဆနှင့်အတူကြွလာပြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တို့သည်ဤပညာရေးဆိုင်ရာအားထုတ်မှုကိုသင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ကြောင်း, မိဘတစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ယနေ့တိုင်းသူငယ်တန်းတိကျတဲ့အယူအဆအပေါ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ မကြာခဏအဖွဲ့အစည်းများ၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဒီဇိုင်းကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ် download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါစိတ်ဝင်စားမိဘများပင်ဖြစ်သည်နိုင်ပါတယ်။
အတော်များများကမူလတန်းကျောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်အနုပညာပညာရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။ ကပြောသည်ခံရကြောင်း, ဘာသာစကားနှစ်မျိုးမူလတန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမွန်တက်ဆိုရီသို့မဟုတ် Waldorf ပညာရေးအဖြစ်အချို့သောပညာရေးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်းကိုလိုက်နာသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများဘာသာရေးပညာရေးနှင့်အထူးသဖြင့်ချစ်လှစွာသောခရစ်ယာန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တန်ဖိုးများ၏ဆက်စပ်ဖျန်ဖြေသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးမြို့မသာသူငယ်တန်းသောအရပ်တို့ကိုချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြအဆောက်အဦများတွင်သင်ပုံမှန်သင်အကြိုက်ဆုံးပျိုးခင်းမှတ်ပုံတင်ပုံစံအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးစားပေးတစ်ခုတည်းမိဘများ၏အများအားဖြင့်ကလေးတွေပေးထားပါလိမ့်မည်။ လူအစုအဝေး၏အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်. ကြောင့်သို့ရာတွင်သင်သည်သင်၏နေအိမ်အနီးတွင်အခြားသူငယ်တန်းအတွက်နေရာတစ်နေရာပူဇော်ဖို့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စက်ရုံအတွက်ထောက်ခံမှုအရပ်ပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာပြောဆိုချက်ကိုရှိပါသည်။ ဒါဟာမျှသာနေရာများကိုခွဲဝေချထားအတွက်ကလေးအားလုံးအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်ရဖို့သေချာခံရဖို့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်အဆောက်အဦးများကြည့်ရှုရန်တိုင်းအခွင့်အလမ်းအားသာချက်ယူပါ။ အထူးသဖြင့်သင်စိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့် site ပေါ်တွင်တောင်းခံကြောင်းကြိုတင်ရှုထောင့်ထဲမှာရေးချပါ။ ဤအချက်အလက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပိုကောင်းတစ်ဦးချင်းစီအဖှဲ့အစညျးမြားနှိုငျးယှဉျနှင့်သင့်ကလေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုဆုံးဖြတ်ချက်စေနိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးချင်းစီအဆောက်အဦများတွင်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလျှင်ဒီတော့သေချာပေါက်သင်၏သားသမီးယူ: သင်၏သမီးသို့မဟုတ်သူမ၏သားတစ်ဦးသူငယ်တန်းအတွက်သို့မဟုတ်မသက်သာနှင့်ကြိုဆိုခံစားရလျှင်သင်ချက်ချင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးသူငယ်တန်းရွေးချယ်တဲ့အခါအဆုံးစွန်သောရှုထောင့်ကအမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးဦးစားပေးသင့်တယ်။
သင်ကဖော်ရွေလေထုနိုင်နှင့်ကလေးများနှင့်မိဘများကလေးမွတျနှငျ့တှေ့ဆုံခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုပြောပြနိုင် A ကောင်းဆုံးသူငယ်တန်း။ ဒေသနာန်ထမ်းများ၏ကိုင်တွယ်အချင်းချင်းသဟဇာတဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ဦးသူငယ်တန်းအတွက်ကောင်းသောပညာပေးလုပ်ငန်းအမြဲတမ်းအဖွဲ့အကျင့်ကိုကျင့်အတွင်းစွမ်းရည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှီခိုသည်။
ကင်းသောင့်လင်းမြင်သာထံမှအရေးကြီးပါသည်။ သင့်ကလေးပြီးနောက်ကြည့်ရှုသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကစက်ရုံတစ်ခုကပညာရေးမိတ်ဖက်သင်နှင့်အတူတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ကလေး၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောလမ်းအတူလိုက်ပါနှင့်မြှင့်တင်ရန်, အသူငယ်တန်းမှမိဘများအဖြစ်အတူတကွအလုပ်လုပ်သောဆိုလိုသည်။ သို့ဖြစ်. မိဘများနေ့စဉ်သူငယ်တန်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရသတိပေးချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်စာရင်းကိုရန်သင့်အလည်အပတ်ခရီးစေနိုင်ပါသည်နည်းလမ်းများနှင့်အညီသင့်ပါသည်။
မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ဦးသူငယ်တန်း၏အဆောက်အဦအရေးမကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မလိုအပ်ပါအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ပရိဘောဂဖြစ်ပေမယ့်တစ်ဦးသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် functional ပရိဘောဂ educationally အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကစားစရာအဖြစ်အရေးကြီးပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအပြင်၌။ DIY နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ, ပစ္စည်း plug ရုပ်ပုံစာအုပ်များနှင့်ဂိမ်းများကစားခြင်းအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ပစ္စည်းများ play အဖြစ်ကောင်းစွာ, မရရှိနိုင်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြစ်သင့်သည်။
မူကြိုကလေးများထက်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရှိသည်, အသက်-သင့်လျော်သောပြဇာတ်နှင့်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းလွဲချော်မဖြစ်သင့်တဲ့သုံးခုနှစ်အရွယ်အဖြစ်, သင်မြင်မှမမေးသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မူကြိုအလုပ်တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့အစည်းအတွက်အားမြင်တွေ့ရပုံကိုမေးပါ။ အရေးကြီးသောရန်ပုံငွေအခွင့်အလမ်းများကိုအာရုံစူးစိုက်မှု, မိန့်ခွန်းများနှင့်အရေးအသားဝယ်ယူ, Self-အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ဧရိယာ၌သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုး၏ဒေသများ၌ရှိကြ၏။
အကောင်းတစ်ဦးသူငယ်တန်းအားလုံးကိုသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုစိတ်ရှည်ရှည်နှင့်အသေးစိတ်ဖြေကြားရပါမည်။ A ကောင်းဆုံးကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအားလုံးပါတီများသူငယ်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြုမူနှငျ့သငျထိုကဲ့သို့သောမိဘများအဖြစ်သူငယ်တန်းအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်သာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်: ဤကိစ္စတွင်မကလျှင်, သင်ပိုကောင်းရှာဖွေနေစောင့်ရှောက်ချင်ပါတယ်။
ငါသည်လက်ျာဘရာစီယာကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ | အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဖက်ရှင်
ကလေးတွေကအဘို့အမှားယွင်းနေသည်ရုပ်ပုံများ - ကွဲပြားမှုကိုရှာဖွေ
အားလပ်ရက်များအတွက် Famileinfreundliche ဟိုတယ်များ